Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Ku saabsan Iswiidhan / Daganaanshaha dalka Iswiidahn / In la guuro
Qoraalkan wuxuu ku saabsanyahay in la guuro. Wax badan ayay ahaan kartaa in laga fikiro haddii aad u guureyso hoy cusub. Waxaad akhrin doontaa waxyaabaha muhiim ahaan kara in la ogaado marka aad guureyso.
Waxaad akhrin kartaa waxyaabo ay ka mid yihiin ka bixidda heshiis kiro, baddalka cinwaanka iyo in boosta lagaa soo daba diro.
Haddii aad ka guurto guri kiro ah waxaa lagaaga baahanyahay inaad samayso ogeysiinta inaad ka baxday heshiiska. Wakhtiga ogeysiinta heshiis ka bixid way ku kala duwanaan karaan guri kireeyayaasha kala duwan. Inta ay leegtahay muddada wakhtigaaga ogeysiinta heshiis ka bixid waxay ku qorantahay heshiiskaaga kirada. Way fiicantahay in aad u qortid guri kireeyahaaga in aad doonaysid inaad iska dhiibtid gurigaaga.
Diiwaan-gelinta dadweynaha iyo wargelinta ku saabsan guuritaan
Diiwaan-gelinta dadweynaha waa diiwaanka aasaasiga ah ee dhammaan dadka ku nool gudaha Iswiidhan. Diiwaan-gelinta dadweynaha waxaa lagu diiwaan geliyaa tusaale ahaan macluumaadkaaga shakhsiga ah, cinwaanka aad deggantahay iyo haddii aad tahay xaas ama leedahay carruur. Meesha aad kaga jirto diiwaan-gelinta dadweynaha waxa ay micno u leedahay degmada aad ku nooshahay ee aad ku bixinayso lacagta canshuurta, halka laguu oggolyahay inaad ka codeyso iyo xaqa kaalmooyinka iyo faa´iidooyinka kala duwan. Degmo kasta waxay xitaa u qorsheysaa hawlaheeda si waafaqsan inta ay leegyihiin tirada dadka ku nool halkaas.
Haddii aad u guurto cinwaan cusub waa inaad wargelisaa Hey'adda Canshuuraha isla gudaha hal toddobaad ka dib markaad guurto. Tani waa muhiim maadaama ay taasi ku qorantahay sharciga diiwaan-gelinta dadweynaha in ay adiga waajib kugu tahay inaad samayso wargelinta inaad guurtay. Waxa kale oo muhiim ah in boostaada ku hesho cinwaan sax ah. Waa bilaash in la sameeyo wargelinta guuritaanka oo waxaad u samayn kartaa qaab dijitaal ah dhanka Hey'adda Canshuuraha boggeeda intarnatka ama in la buuxiyo foom.
Haddii aad deggantahay guri waa in cinwaankaaga ay ku jirto lambar guri. Lambarka guriga wuxuu leeyahay afar tiro, tusaale ahaan 1001, taas oo muujinaysa dabaqa iyo halka dabaqa ee gurigu ku yaallo. Adigu waxaad lambarka guriga ka helaysaa heshiiska kiradaada, sanduuqa boosta ama albaabka bannaanka.
Ka soo daba dirista boosta
Adigu waad dalban kartaa in lagaa soo dabo diro boostaada. Tani micnaheedu waa in boosta loo diray cinwaankaagi hore loo sii gudbin doono cinwaankaaga cusub. Dhinaca Svensk Adressändring AB ayaad ka dalban kartaa ka soo dabo dirista boosta. Ka fikir in cinwaankaaga diiwaan-gelinta dadweynaha aanu is baddalin haddii aad dalbato in lagaa soo dabo diro boosta.
Rukumashada telafoonka ee telafoonka meel keliya yaalla (maaha rukumashada moobilka)
Rukumashada noocee ah iyo heshiisyadee ayaad u baahantahay inaad ogeysiis dhiibto inaad ka baxayso haddii aad guurayso?
Badanaaba adiga ayaa mas'uul ka ah in hoygaaga aad nadiifinta guuritaanka ku samaysay marka aad ka tagayso, ma ku xirna haddii aad deggantahay guri filo ah, guri la bar iibsaday ama guri la kireystay. Nadiifinta marka la guurayo si micno dheeraad ah leh ayay uga baahsantahay nadiifin caadi ah oo qaadataa wakhti badan. Adiga laf ahaantaada ayaa samayn kara nadiifinta guuritaanka ama waxaad wakiilan kartaa shirkad. Haddii nadiifinta guuritaanka aanay si ku filan u fiicnayn waxaa waajib kugu noqon karta in aad bixiso lacag.
Maxaa muhiim ah in adigu aad ka fikirto haddii aad guuri doonto?